အကြမ်းစားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေအံ့ဩမှင်သက်သွားအောင် အလန်းစားဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ - TGI Daily News
မကြာသေးမီကတော့ အေးမြတ်သူဟာ သူမရဲ့ Facebook pageလေးမှာ “တေင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ပေါင်တံ………..ကျစ်လစ်တဲ့တင်းပါး………
…..သေးသွယ်တဲ့ခါး….. ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ
မမြတ်လေးရဲ့ ငယ်ဘဝ အိမ်မက်တခုပါ….ခုတော့လမ်းစလေးမြင်ရပြီရှင့်…ထပ်ကြိုးစားရမယ်..နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် Miss ဖြစ်ချင်ခဲ့တာလည်း ရူးသွပ်မှု့တခုပေါ့…လက်ရှိနိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခွင့်ရမယ့်ညီမတွေ နဲ့ နောင်ကိုနိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခွင့်ရမယ့်ညီမတွေ အများကြီးကြိုးစားစေချင်တယ်…. အမလို အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီး က ကြိုးစားချင်ပေမယ့်အခွင့်အရေးမရတော့ဘူး …အခွင့်အရေးရှိတဲ့ညီမတွေ ကြိုးစားပေးကြပါနော်….အင်တာနေရှင်နယ်အဆင့်မမှီတဲ့ အရပ် နဲ့ ကြီးရင့်လာတဲ့အသက်နံပါတ်တွေကြောင့်…. ကိုယ့်ဘော်ဒီ ကိုတော့ အင်တာနေရှင်နယ်နေမှီအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်လို့……” ဆိုပြီး ရေးသားကာ အလန်းစားပုံတွေတင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ……ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အကွမျးစားဖကျရှငျဒီဇိုငျးနဲ့ ပရိသတျတှအေံ့ဩမှငျသကျသှားအောငျ အလနျးစားဖွဈနတေဲ့ အေးမွတျသူ
မကွာသေးမီကတော့ အေးမွတျသူဟာ သူမရဲ့ Facebook pageလေးမှာ “တငျေ့တငျးခိုငျမာတဲ့ပေါငျတံ………..ကဈြလဈတဲ့တငျးပါး………
…..သေးသှယျတဲ့ခါး….. ကို ပိုငျဆိုငျခငျြတာ
မမွတျလေးရဲ့ ငယျဘဝ အိမျမကျတခုပါ….ခုတော့လမျးစလေးမွငျရပွီရှငျ့…ထပျကွိုးစားရမယျ..နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျ Miss ဖွဈခငျြခဲ့တာလညျး ရူးသှပျမှု့တခုပေါ့…လကျရှိနိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျခှငျ့ရမယျ့ညီမတှေ နဲ့ နောငျကိုနိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျခှငျ့ရမယျ့ညီမတှေ အမြားကွီးကွိုးစားစခေငျြတယျ…. အမလို အသကျကွီးတဲ့ အမြိုးသမီး က ကွိုးစားခငျြပမေယျ့အခှငျ့အရေးမရတော့ဘူး …အခှငျ့အရေးရှိတဲ့ညီမတှေ ကွိုးစားပေးကွပါနျော….အငျတာနရှေငျနယျအဆငျ့မမှီတဲ့ အရပျ နဲ့ ကွီးရငျ့လာတဲ့အသကျနံပါတျတှကွေောငျ့…. ကိုယျ့ဘျောဒီ ကိုတော့ အငျတာနရှေငျနယျနမှေီအောငျ ကွိုးစားနပေါတယျလို့……” ဆိုပွီး ရေးသားကာ အလနျးစားပုံတှတေငျပေးလာပါတယျ။ ကဲ……ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။